Dowlada Koofur Afrika oo sheegtay in ay ugu deeqeyso Soomaaliya 11 malyan oo dollar – idalenews.com
Dowlada Koofur Afrika oo sheegtay in ay ugu deeqeyso Soomaaliya 11 malyan oo dollar
Dowlada Koofur Afrika ayaa sheegtay inay ugu deeqeyso wadanka Soomaaliya lacag dhan 11 malyan oo dollar.
Madaxweynaha dalka Koofur Afrika Jacob Zuma ayaa ka sheegay deeqdan ay dowladiisu siinayso dowlada Soomaaliya kulan uu ugaga gudoomayay safiirka Soomaaliya u fadhin doono dalka Koofur Afrika.
“Dhibaatada haysata dadka Soomaaliyeed ee ah dagaalada iyo abaaraha aad ayaan uga damqanay, hadda oo ay dib ugu soo laabteen wadada horumarka iyo soo kabashada waan garab taagnaan doonaa waana ka caawin doonaa sidii dib loogu dhisi lahaa dalka Soomaaliya,”ayuu yiri madaxweyne Zuma.
Madaxweynaha dalka Koofur Afrika ayaa soo dhoweeyay qudbadii uu madaxweynaha Soomaaliya ka jeediyay kulan madaxeedka ururka midowga Afrika, waxana uu ka codsaday shacabka Soomaaliyeed inay isku tashadaan.
Safiirkii ugu horeeyey ee abid dowlada Soomaaliya uga wakiil noqdo dalka Koofur Afrika Sayid Sharif ayaa sheegay waxqabadka ugu weyn ee safaaradu qaban doonto inay noqon doonto sidii dadka Soomaaliyeed ee ku sugan wadanka Koofur Afrika ay si nabad ah ugu noolaan lahaayeen isla markaana ay awood ugu heli lahaayeen in ay waqtigii ay doonaan dib ugu laabtaan dalkooda.
Dalka Koofurka Afrika ayaa waxaa ku nool kumanaan ruux oo Soomaali ah kuwaasoo ah ganacsato badankood ku ganacsada tuulooyinka dalka Koofur Afrika.
Dowlada oo bilowday dadaalo ay ku doonayso in dib loogu soo celiyo xiriirkii hore ee Shiinaha